Psychology – My Life Magazine
ओम बानियाँ हिजोआज संसारभरि नै बलात्कारका विभत्स घटनाहरू घटिरहेका छन् । नेपाल पनि यसमा अछूतो छैन । दिनहुु“ रेडियो टीभी तथा पत्रपत्रिकामा बलात्कारका घटनाको खबर सुनिन्छ, देखिन्छ । केही वर्ष यता नाबालिकामाथि सामूहिक बलात्कारका घटनासमेत…
‘मस्तिष्कमा अद्भुत तरंग उत्पन्न हुन्छ । वरिपरि तिहारको झैँ झिलिमिली दृश्य देखिन थाल्छ ।’ यौनसम्बन्धको क्रममा चरम आनन्द प्राप्त हुँदाको स्थितिलाई बखान गर्न वैज्ञानिक र शोधकर्ताले यस्तै वाक्यांशको प्रयोग गर्छन् । दुई मन मिल्ने स्त्री–पुरुषबीच…
The 12 cognitive biases that prevent you from…
PsychologyDecember 7, 2017
George Dvorsky The human brain is capable of 1016 processes per second, which makes it far more powerful than any computer currently in existence. But that doesn't mean our brains don't have major limitations. The…
किन हरेक महिलामा फरक यौन चाहना हुन्छ ?
महिलाहरु के चाहन्छन् ? सदियौँदेखि आम मानिसदेखि लिएर मनोवैज्ञानिक सम्मलाई यो प्रश्नले दिक्क पार्ने गरेको छ । सिगमन्ड फ्राएड जस्ता महानतम मनोवैज्ञानिक देखि लिएर हलिउडका अभिनेता मेल गिब्सन सम्म यो सवाललाई लिएर हैरान छन् ।…